Siminaar sare loogu qaadayay aqoonta haweenka macalimiinta ah oo ka furmay Guriceel | Radio Muqdisho
Siminaar sare loogu qaadayay aqoonta haweenka macalimiinta ah oo ka furmay Guriceel
Published on January 3, 2013 by admin · 2 Comments · 1,052 views
Tababar sare loogu qaadayo aqoonta haweenka macalimiinta ah ee ku dhaqan gobolada dhexe ee dalka ayaa maanta ka bilaawday dagmada Guriceel ee gobolka Galgaduud.
Siminaarkan oo ah mid ay soo qaban qaabisay hay’adda Iida oo ah hay’adda ka shaqeysa hormarinta arrimaha bulshada, waxaana tabarkan ka qeyb galaya haween ka kala yimid gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Galmudug.
Xaliimo Ismaaciil ibrhaahim oo ah madaxa hormarinta Iida ee gobolada dhexe oo furitaankii siminaarka hadal ka jeedisay ayaa sheegtay in u jeedada siminaarkan uu yahay sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta haweenka sanad waliba sanadka ka dambeeyo maadama haweenku ay yihiin udub dhaxaadka qoyska.
Waxa ayna intaasi ku dartay in ay sanad waliba ay qabtaan siminaar kan la mid ah si looga hadlo hormarinta haweenka iyo sidii ay uga shaqeyn lahaayeen hormarka dalka.
Siminaarkan ayaa qeyb ka ah siminaaro ay bixiso hay’adda Iida kaas oo loogu talagalay sidii hormar iyo wacyi galin loogu sameyn lahaa shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada iyo caasimada.
hilowle says:	January 3, 2013 at 3:37 pm	Maashaa ALLAH waa wax lagu farxo wacyigelintaan oo kale in markasto ay helaan Dumarka Somaliyeed sbabtoo ah 20ki sano ee la soo dhaafay dhibka badi ayakow ku dhacay marka Xalimo Ismaciley waa ku amaanantahay in aad howlo adag ka wado Gobalada Qaranka.
Reply »	Feysal says:	January 3, 2013 at 7:29 pm	Masha.alahu nabada wadanka kajirto ayay muujineysa daliilkeda e alahano daa imo aamin aamin